Mashaariic HormarineedOO laga hirgaliyay Degmada Warshiikh – Radio Muqdisho
Mashaariic HormarineedOO laga hirgaliyay Degmada Warshiikh
Mashaariicdaan Horumarineed ee laga Hergalinayo Degmada Warshiikh ee Gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxaa ka mid ah Ceel Biyood oo leh biyo macaan kaasi oo ay dhagax dhigeen Maamulka degmada Warshiikh iyo mas,uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeele iyadoo uu taaganyahay riiqii Ceelka qodayay iyo masharuuc degmada Warshiiq looga sameynayo soolarka leerarka Cadceeda ku shaqeeyo oo laga hergaliyay degmada Warshiikh ee gobolka Shabeelaha dhexe
Degmada Warshiiq oo ka tirsan Gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxaa horay ugu jirtay Biyo xumi iyadoo aysan laheyn Ceel biyood wanaagsan waxaana ku yaala Ceel Biyood leh biyo dhanaan ah oo bulshada ku nool degmada Warshiikh ay ka haysatay dhibaatooyin dhinaca helitaanka biyo Nadiif ah iyo waxey ciriiri ay ugu jireen helitaanka koron joogta ah oo aysan laheyn degmada
Gudoomiyaha Degmada Warshiiq ee Gobolka shabeelaha dhexe Axmed xuseen Axmed shiidka ayaa ka warbixiyay mashaariicda horumarineed ee laga hergalinayo degmada warshiiq.
Xildhiban Maxamuud Xuseen Mooge oo ka mid ah Xildhibanada Baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeele ayaa ka hadlay muhiimada mashaariicdan lagu hormarinayo degmada wuxuuna ku booriyay bulshada ku nool degmada Warshiiq in ay ka shaqeeyaan horumarka degamda.
Michael Kenya kisa oo ka socday hay ,adda Ceelka qodaysay oo lagu magacaabo Somali Stability Fun ayaa ka hadlay faa,iidada Ceelkan uu u leeyahay bulshada ku nool degmada Warshiikh.
Wasiirka wasaaradda biyaha Tamarta iyo macdanta ee dowlad goboleedka Hirshabeele Axmed muuse Xuseen ayaa sheegay in wasaaradda biyaha Tamarta iyo macdanta ee dowlad goboleedka Hirshabeele ay ka shaqeyn doonto horumarka gobolka Shabeelaha dhexe .
Guddiyada amniga iyo Arrimaha gudaha ee Golaha Shacabka oo ka shiray amniga xildhibaanada iyo xarunta Golaha Shacabka.
Daawo: Sawiradda Sameeynta ay reerbatay Duufaanti ku dhufatay gobolada Waqooyi